မုန့်ယူမလား တုတ်ယူမလား .. | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » မုန့်ယူမလား တုတ်ယူမလား ..	31
မုန့်လေး တစ်ခါ စားဖို့အရေးဗျာ.။ မုန့်စားချင်လျှင် အားဝါး ပေးပါဦး ..။ ကပြပါဦး ..။ ရီ ပြပါဦး စသည်ဖြင့် လူကြီးသဘောကျ လုပ်ပြရသည့် ကလေးပမာ … စကိုင်းနက် အင်တာနက်လိုင်း လျှောက်ချင်တာလား… တီဗီလိုင်းပါယူမှ ပေးမယ်။ ဖုန်းလိုင်းပါ ယူမှ ပေးမယ် .။ တီဗီလိုင်း တနှစ်စာ အင်တာနက်ခ သုံးလစာ ဖုန်းခ ငါးနာရီစာ ကြိုသွင်းမှပေးမယ်..။ ဟယ် .. သူ့မုန့်စားချင်တော့ လဲ လုပ်ပြ၇တာပေါ့ဗျာ .. ရော့ အင့် ယူ ယူ စကိုင်းနက် အင်တာနက် တစ်လိုင်းရဖို့အရေး မှော်ဆရာ ၁၄ သိန်းကျော် ကျွတ်စကီး ပြခဲ့သည်.။
ဒေါင်းလော့ စပိ ဒီမှာသာ ကြည့်ကြပေရော့အဲဒါ ည ကိုးနာရီခွဲမှာ ဒေါင်းနေတာ
မှော်ဆရာ About မှော်ဆရာ
has written 55 post in this blog.
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ရေးသားချက်များကိုသာ ရေးသားနှိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်. နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးပညာနဲ့ ကျောင်းပြီးပါတယ်။
ပွင့်လင်းမှုနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်နိုးပါတယ်။
သဘောကောင်းပါတယ်။ လက်သီးထိုး ပြင်းပါတယ်။
View all posts by မှော်ဆရာ →	Blog
Inz@ghi says: ဘာဖိုင်တွေ ဒေါင်းနေတာလဲဂျ….
Inz@ghi says: ကနဖျား .. (ရှာရှေနဲ့ ..ဦးတာနဲ့ ဖျားတာ တူတူဗျဲ) စာဖတ်သူအနေနဲ့ ကျေးကျေးပါ..
P chogyi says: မှော်ဆရာရေ
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ကျော်က 256 စပိယူထားတယ်
Inz@ghi says: ကိုက်သလား မကိုက်ဝူးလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2761
ဦးဦးပါလေရာ says: ဒီလောက်တောင် ၀ီရိယကောင်းရသလား ဗိုက်ဗိုက်ရယ်… :D
mamanoyar says: အင်း ဟုတ်ပါတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1589
Moe Z says: ကမှော့်အတွက် စကိုင်းနက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2271
htoosan says: စကိုင်းနက် တော့တော်ပါပြီဆိုပြီး တစ်ခြားလှည့်ရန်လည်း မစဉ်းစားပါနဲ့ ။ ထူးမခြားနားတွေပါဘဲ….
Inz@ghi says: ဟိုလူဒွေပြောတော့ တမိနစ် ၄ကျပ် ကော်နက်ရှင် က …လွှတ်ကောင်း ဆို..
Foreign Resident says: ” စကိုင်းနက် တော့တော်ပါပြီဆိုပြီး တစ်ခြားလှည့်ရန်လည်း မစဉ်းစားပါနဲ့ ”
amatmin says: ဟိုတခေါက်ပြောတုန်းကတော့..
ခုကျတော့ တမျိုးရယ်.. မုန့်မျှော်ရင်း..တုတ်စာမိပြီပေါ့ ..
ho leo says: အခုလည်း 430 GSM တွေကိုinternet free က ၂ကျပ်လျော့ပေးတော့ပျော်သွားတာပေါ့
the best says: စကိုင်းနက် ရုံးချုပ်က တာဝန်ရှိသူကပင် “လိုင်းတိုးယူလဲ အပြည့်ရမယ်လို့ အာမမခံနှိုင်ပါဘူးတဲ့ ခင်ဗျာ …။” လို့ ပြောကတည်းက
လတ်လတ် says: မီးလေးအချိန်မှန်လာနေတာ အဆိုးထဲကအကောင်း……..နို.မိုဆို…..
မှော်ဆရာ says: လတ်လတ်က မြို့ကြီးမှာ အင်တာနက်ဆိုင် ဖွင့်ထားတာ ထင်တယ် ..
မှော်ဆရာ says:ူဒီစာကို ဖတ်ရတဲ့ သူတွေက မှော်ဆရာ သူ့စီးပွားရေးကို စကိုင်းနက်က ဒုတ်နဲ့ထိုးလို့ ရေးတယ် ထင်ကြမယ် .. တကယ်တော့ ဒုတ်နဲ့ အထိုးခံရတာ ကျွန်တော့ဆိုင်ကို လာသုံးတဲ့ သူတွေပါ ..။
pan pan says: ကမှော် စိတ်လျှော့စိတ်လျှော့ အမြတ်ကြီးစားပြီး မတန်တဆလုပ်တဲ့လူတွေ သူ့စရိတ်နဲ့သူ သွားလိမ့်မယ်
char too lan says: ပြောဒေါ့ဖြင့် ခန္တီပါရမီဖြည့်တော်မှုတဲ့ ပါရမီဖြည့်ဘက် စကိုင်းနက်ဆို……
ခုတော့ အပစ်ပြောပီပေါ့လေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8225
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်ကတော့ မန်းလေးမှာ လိုင်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆိုင်လှည့်သုံးတာပါ၊။
Nyein Nyein says: ကိုမှော်ပြောတာကို ဖတ်လိုက်တော့ Barcamp Yangon ပွဲတုန်းက Myanmar Vs Internet ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပြောကြတာလေးကို သတိရမိသွားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်တာနက်လိုင်းဟာ လာဘ်စားပါတယ်။ မျက်နှာလိုက်ပါတယ်။ နေရာနာမည်နဲ့ အဆောက်အဦးတွေရဲ့ ဆိုင်းပုဒ်ပေါ်မူတည်ပြီး အင်တာနက်လိုင်းဟာ ကွာခြားပါတယ်။ ဘယ်တော့များမှ တက်လာမှာလဲဆိုပြီးစောင့်ရင်း ရင်မောရပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 368
the best says: တစ်ကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။စီးပွါးရှာတာချင်းအတူတူ ကိုင်းကျွန်းမှီ၊ကျွန်းကိုင်းမှီရှိသင့်တာပေါ့။
kyeemite says: စာနာပါသည် ကမှော်ညီ..
Thu Wai says: တော်သေးတာပေါ့ ကျွန်တော် မဝယ်မိလို့ နေ့ခင်းဆို ရုံးက နေ အင်တာနက်သုံးတယ် ညဆိုရင် မူးပြီးအိပ်နေတယ် တော်သေးတယ် အနေအထိုင် မှန်သွားလို့ :D
manawphyulay says: မှော်ဆရာက မှော်အစွမ်းနဲ့ ဖိုင်တွေ တအား ဒေါင်းတော့ စကိုင်းနက်တောင် မခံနိုင်တော့ပါလား ဟရို့
MaMa says: စကိုင်းနက်ကို အပြစ်မတင်နဲ့။
နောက်-မောင်ဂီသင်ကြားပေးလို့ တရုတ်ဗေလုဝထုံး နှလုံးမူပြီး ပိုစ့်တင်တာ အဆင်ပြေသား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 900
snow white says: (ကိုယ့်ပိုက်ဆံတော့အရှုံးမခံပါနဲ့ ဆက်လက်သာသုံးရမှာဘဲလေ လိုင်းမကောင်းရင် တစ်ဝက်ပြန်ပေးမယ်လို့လည်း သူတို့ကမပြောထားတော့ကိုယ့်ဘက် ကပြန်ရမယ့်လမ်း တစ်လမ်းတောင်မမြင်ဘူး မိအေးနှစ်ခါနာတော့အဖြစ်မခံပါနဲ့ သည်းညည်းခံပြီးတော့သာ ကိုမှော်ဆရာဆက်လက်အားပေးလိုက်ပါအုံးပြည်သူ့အတွက် sky net)…
padonmar says: ADSL လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါဘဲ။
မောင်ပေ says: အဟမ်း
ဇောက် ထိုး says: ကျွန်တော် ပြောတတ်တာ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ ကျွန်တော် တကယ်ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်။
ဦးဦးပါလေရာ says: တခုတော့ရှိတယ် ကိုမှော်
အဲဒီစကားကို Redlink ကအော်ပရေတာ(မ)ကပြောရင် ဘယ်လိုပြောမယ်လို့ထင်လို့လဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel reply
Comments By Postအဟံ ပထမံ - kai - weiweiမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - ko pauk mandalay - ko pauk mandalay``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - ခင် ခ - kaiအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - Ma Ei - အရီးခင်လတ်မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ဦး ကျောက်ခဲ - ko pauk mandalayသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - အရီးခင်လတ် - KZရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - ဦး ကျောက်ခဲ - padonmarကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - ဦးဦးပါလေရာ - Munetezကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - Lay Pai - ခင် ခတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - KZ - ရွှေတိုက်စိုးPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် -etone - ကြောင်ဝတုတ်အထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - KZ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအိပ်မက်မင်းသမီး - KZ - မောင် ပေဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - အရီးခင်လတ် - ရွှေတိုက်စိုးနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ဦးဦးပါလေရာရထား ထွက်တော့ မယ် - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - Miss Crystallineမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - kai - ခင် ခသမ္မတကြီး ဦးကြောင် အိမ်သာview - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအမုန်းတွေဝေး အပြုံးတွေပေးမယ့် ဒီည................................ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ရွှေတိုက်စိုးအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - Munetez - ကြောင်ဝတုတ်လူပါး ပုလင်းထိ - Ma Ei - ဆူးသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - ကြောင်ဝတုတ် - အလင်း ဆက်East West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities